eNasha.com - डा. प्रदीप भट्टराई
बाँच्न नजानेको एउटा पत्रकार
२०२४ साल फागुन ९ गते ताप्लेजुङको तेर्लोकमा जन्मिएँ । यो ताप्लेजुङको दक्षिण पूर्वमा पर्छ । हामी जन्मिँदा हामीले ऐना देखेनौँ, पहिलो पटक कञ्चनजङ्घा देख्यौँ । एकदमै निम्नमध्यम वर्गीय परिवार, अर्काको घरमा बनिबुतो गर्ने परिवारमा जन्मिएका थियौँ । राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पूर्व हान्ने बेलामा त्यहाँ लगिएका पुगेका व्यक्तिहरु थियौँ । बाह्रबीसे भट्टर्राई भन्छन् हामीलाई किनभने त्यसबेला २४० घर भट्टराई थियौँ । पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँ ल्याइएका व्यक्तिमा महिलाहरु नभएकाले विवाह गर्दा त्यहीँका स्थानीय क्षेत्रीयहरुसँग बिहे गरेपछि हामी पनि क्षेत्री भयौँ ।
छोरीको आशामा मेरा बा-आमाले सात सन्तान जन्माउनु भयो । म चौथो सन्तान थिएँ । मसँगै स्कूल तेर्लोक प्रा.वि. जन्मियो र मसँगै निमावि भयो । म त्यो स्कूलको पहिलो ब्याजको प्रथम विद्यार्थी थिएँ । त्यसपछि म सिनाम गाउँमा गएँ, आठ कक्षा पढ्न । २०३७ सालमा बामपन्थी आन्दोलनमा लागेकाले म जेल परेँ । एउटा भनाइ नै थियो, ताप्लेजुङमा कि त फूल फूल्छ कि त कम्युनिष्ट फूल्छ । म पनि कट्टर कम्युनिष्ट भएर निस्किएको थिएँ । मैले जेलबाट नै आठ कक्षाको परीक्षा दिएको थिएँ ।
७८ प्रतिशत ल्याएर एसएलसी पास भएँ र तीन नम्बरको कमीका कारण त्यस वर्षो बोर्डमा नाम आएन । त्यस वर्ष नेपालीमा ९४ अङ्क ल्याउने रेकर्ड मैले बनाएँ र त्यो रेकर्ड अहिलेसम्म कसैले पनि बनाएको छैन । राजनीतिसँगै साहित्यकर्ममा पनि लागियो । १९८४ मा अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग वर्षको अवसरमा नेपालभरिको प्रथम भएको थिएँ । कोभन्दा को कम भन्ने रेडियो कार्यक्रममा दुइ पटक प्रथम भएको थिएँ ।
एसएलसी पास भएपछि गाउँमै पढाउने आमाको आग्रह थियो तर म गाउँमा बस्न सक्तिनँ भनेर गाउँमा राँगो बेचेको पैसा लिएर काठमाडौँ आएँ । काठमाडौँ आएपछि पैसा सकियो र कति दिन त मैले ठेला ठेलेर जीविकोपार्जन गरेको छु । धेरैलाई लाग्दो हो, मैले ठेला नै किन ठेलेँ । त्यो बेला सबैभन्दा बढी पैसा कमाइ हुने व्यवसाय नै ठेला थियो । एक दिन ठेलेको ठेलाले मेरो साता दिनको खर्च व्यहोर्ने गर्दथ्यो ।
एमएस्सीमा म गोल्डमेडलिस्ट, एमकम् र समाजशास्त्रमा एमए गरेपछि विद्यावारिधि पनि त्यही गरेँ ।
आइएस्सी पढ्दै गर्दा चलचित्र 'च' लेखेको चाहिँ २०४२ सालमा 'प्रिया' पत्रिकाबाट हो । नाटकका व्यक्तिहरु टेलिभिजनतिर तानिएको कारण 'रंगकर्मीहरु टेलिभिजनतिर पोइल गए' भनेर लेखेपछि पहिलो लेखबाट नै लेख्ने व्यक्तिको खोजी भएको थियो । कतिले गालीसमेत गरे र त्यही गाली नै मेरो नाम स्थापित गर्ने माध्यम बन्यो । यसपछि कलाकार आवाज, तरङ्ग, पर्दा, शताब्दी आदिमा काम गरियो । 'शताब्दी' त रमण घिमिरे र मैले संयुक्त सम्पादन गरेका थियौँ ।
तुलसी घिमिरे र हामी हिरोइनको खोजी गर्दै जाँदा कालिम्पोङको कालझोलामा निरुता सिंहलाई भेटेका थियौँ । उनलाई शताब्दी पत्रिकाको खोज मान्न तुलसी घिमिरे तयार हुनुभयो र चलचित्र 'दक्षिणा'मा उनी नायिका बनिन् । शताब्दीको पहिलो अङ्कमा नायिका बन्न चाहनेहरुबाट फोटो माग गरेका थियौँ । झरना राजभण्डारीको फोटो उत्कृष्ट मानेर हामीले उनको फोटो छाप्यौँ र उनलाई भूमिका दिलाउन पहल गर्‍यौँ । 'दाइजो' चलचित्रमार्फ् झरना देखापरिन् र हाम्रो उद्देश्य पर्ूण्ा भयो । त्यसपछि शताब्दी कहिल्यै छापिएन ।
मैले अन्य विषयमा पनि कलेज पढाएँ तर फिल्म पत्रकारिता पनि पढाएँ । चलचित्र पत्रकारमा सबैभन्दा बढी पत्रिका चलाएर बन्द गर्ने व्यक्ति म नै हुँ भनेर आफ्ना विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्‍यो ।
बीचमा म चलचित्रबारे लेख्दिनँ भनेर कसम खाएको थिएँ । मैले २५ प्रतिशत पनि क्रेडिट पाइनँ भनेर सधैँ लागिरहृयो । त्यसैले चलचित्र पत्रकारिता त्याग्ने घोषणा गरेँ । तर बसुन्धरा भुषालजस्ता केही कलाकारहरुले मलाई लेख्न कर गर्नु भएको थियो । रिपोर्ट्स क्लबबाट घोषणा गर्दा सबै स्तब्ध भएका थिए । जसलाई म गाली गरेर लेख्थेँ, उनीहरुले नै मलाई लेख्न आग्रह गर्नुभएपछि पत्रकारिताभन्दा सैद्धान्तिक लेखन चाहिँ लेख्छु भनेर वचन तोडेँ ।
चलचित्र समीक्षक समाजको अध्यक्ष भएपछि भने म हलिउडमा पाइलो टेक्ने पहिलो पत्रकार बन्ने अवसर पाएँ । बेभर्लीहिलस्थित एकेडेमी अवार्डका एक्जुकेटिभ डाइरेक्टर ब्रुस डेभिससँग भेटेर नेपाली चलचित्रको इतिहासको लाइब्रेरी रिफरेन्स दिएँ । मलाई अन्तर्रर्ााट्रय फिल्म क्रिटिक अवार्डको सदस्य बनाइयो । त्यही नाताले सम्भवतः अर्को वर्षेखि मलाई एकेडेमी अवार्डको फरेन ल्याङ्वेज क्याटगरीअर्न्तर्गत वैकल्पिक जुरी मेम्बर बनाइने सम्भावना छ । त्यही बेला मैले सनफ्रान्सिस्को युनिभर्सिटीमा नेपाली चलचित्रका बारेमा एक घण्टा लेक्चर दिएँ । त्यस्तै न्यूयोर्क फिल्म क्रिटिक सोसाइटीमा 'ओरिएन्टल सिनेमा'का विषयमा मेरो भाषण चाखपूर्वक सुने ।
पाठकका कारण नै म बनेँ, त्यसैले म पाठकहरुलाई न्याय गर्न चलचित्रका लागि थोरैधेरै लेखिरहने छु ।
जिन्दगी चलाउन पढाएँ र विज्ञापन एजेन्सीहरुमा काम गरेँ । अथवा के गरिनँ ? ठेला ठेल्नेदेखि लिएर अनेक कामसहित । सबैभन्दा खुशीको कुरा के छ भने आफ्नो बुताको भरमा अमेरिकाको युनएन एसेम्ब्लीमा राष्ट्रपति बुसको भाषण सुन्न पनि पुगेँ । यी सबै क्षण मेरालागि ज्यादै प्रेरणाप्रद छन् ।
ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा चलचित्र विकास बोर्डको अफर आए पनि टाट्नोको बाख्रो भएर घाँसमात्र खान नरुचाएकाले मैले अस्वीकार गरिदिएँ । त्यसबाहेक अन्य ठाउँबाट कसैले मेरालागि भनेर केही काम गरिदिएको छैन । तर म सधैँ अरुका लागि हरदम तयार रहेँ ।
म साइन्स पढ्थेँ । त्यसबेला साइन्स पढ्ने महिला निकै कम थियो । सस्तो प्रेमतिर कहिल्यै मन गएन । केटी भनेको इज्जत दिने विषय हुन् भन्ने स्कूल अभ थटबाट प्रेरित थिएँ । बाँकी रहृयो, केटी खोज्दै जाने कुरा, त्यो त कहिल्यै मन रहेन ।
अँ मैले ट्यूसन पढाउँथे र जसलाई मैले ट्यूसन पढाउँथे तिनले मलाई मन पराउँथिन् । उनले बिहे गर्नुपर्ने अड्डी गरिन्, मैले बिहे गर्ने वाचा गरेर घर पठाइदिएको थिएँ । तर समय क्रममा उनले त्यो वाचा बिर्सिन् । मलाई थाहा थियो, उनले समयक्रममा त्यो बिर्सिने छिन् । अझै पनि उनीसँग कहिलेकाहीँ भेट हुन्छ, उनी अहिले जिम्मेवार डाक्टर बनेकी छिन् ।
कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ, मेरो जीवन पनि सिनेमासँग मिल्न जान्छ होला । यदि त्यस्तो भयो भने त्यो सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
एक दिन मेरी श्रीमती फेन्ट भइन्, त्यो दिन उनलाई मैले ओम् नर्सिङ् होम लिएर गएँ । त्यही नारीले मेरी श्रीमतीको ट्रिटमेन्ट गरेकी थिइन् । यो क्षण सबैभन्दा अचम्मको क्षण लागेको थियो ।
यो पनि भन्नु पर्छ, मेरो सफलताको पछाडि मेरी श्रीमतीको हात छ ।
एड्स भयो !
पत्रकार महासंघको नारायणघाटमा सम्मेलन थियो । त्यो सम्मेलन पत्रकार महासंघको फ्लप सम्मेलनमध्ये एउटा थियो । मैले सम्मेलनबाहेक अन्य के कुरा नारायणघाटमा हिट थियो भनेर लेख्दा पत्रकार शोभा चन्दको क्याटवाक् पनि हिट थियो भनेर लेखेको थिएँ । (उनी मिस क्याटवाक् पनि भएकी थिइन्) उनले त्यसलाई ठूलो इस्यू बनाइन् र मेरो बारेमा दृष्टि साप्ताहिकमा एड्स लाग्यो भनेर लेखिन् । त्यो खबर पहिलो पटक श्रीमतीले मलाई बताएकी थिइन् । तर मेरी श्रीमती कस्ती छिन् भने आकाश खस्छ भन्यो भने पत्याउलिन् तर मैले रक्सी खान्छु र अरु केटीसँग लागेको छु भन्यो भने पत्याउँदिनन् । यस्ता हल्ला पनि नउडेका होइनन् ।
मसँग आजको दिनमा केही छैन । तर हरेक शब्द मेरा हतियार हुन् । मेरा हरेक शब्द कसैकसैले क्षेप्यास्त्रसँग तुलना गर्छन् । कोही मसँग सहमत होस् या नहोस्, मैले देखेको सत्यमा म कहिल्यै डगिनँ । र, डग्दिनँ पनि । फागुनदेखि म ४० वर्षको लागेँ । अब मलाई मलामीको लोभ लाग्न थाल्यो । पहिला मलाई मलामीको कहिल्यै लोभ थिएन । घाटमा कोही पो नहुने हो कि भनेर म डराउन लाग्न थालेको छ । जसका कारण नै होला अहिले मेरा अक्षरहरु भुत्ते खुकुरी भएका छन् । हिजोका जस्ता आक्रामक शब्द हिजोआज चलाउँदिनँ ।
राजेश हमालको नाङ्गो फोटो नछापिएको होला भन्न सक्तिनँ । किनभने ठकुरी परिवारमा छोराको केटी साथी र छोरीको केटा साथीजस्ता कुराहरु सामान्य थिए । चीन, पाकिस्तान, भारत, रुसजस्ता ठाउँमा शैक्षिक वातावरणमा जन्मिएका राजेश हमालले खुलापन नै जीवनमा उतारेका थिए । यदि कामना छापिएको नाङ्गो फोटो मैले पाएको भए म पनि छाप्थेँ । किनभने पत्रकारिताले 'स्कुप' भन्ने जन्म त्यस्तै कामका लागि भएको हो । कामनाले आफू स्थापित गर्न धेरै स्कूपहरु छापेको छ । त्यो पत्रकारका तर्फाट गर्नुपर्ने काम थियो तर म त्यो स्कूपको विरुद्धमा किन थिएँ भने कामनालाई ढाल्न पाइयो भने मेरो पत्रिका स्थापित हुने थियो भन्ने लोभका कारण राजेश हमालको पक्षमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने, वक्तव्य लेख्ने र कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने कुराको साक्षी बसेँ । यसो गर्नुको मुख्य कारण के थियो भने भर्खरै माथि उठ्न लागेको राजेश हमालमाथि यस्ता कुराले अप्ठेरो नपारोस् र एउटा सम्भावनायुक्त नायकको अवशान नहोस् भन्ने नै थियो । त्यही सिद्धान्तका कारण मैले राजेश हमाललाई सघाउन पुगेको थिएँ । यो सबैभन्दा ठूलो स्क्याण्डल बन्न पुग्यो ।
फिक्सनको कागजी हिसाबको संस्थापक हुँ तर यथार्थको होइन । शुरुको बेलामा नारायण वाग्ले र भरत शाक्य संयोजक हुन् । फिक्सन जन्मियो । चुनाव गराउनुपर्ने अवस्थामा भरत शाक्य र रमण घिमिरे अध्यक्षमा उठे । एउटा भोटका कारण रमण घिमिरेले हार्नुभयो । मलाई लाग्छ, त्यो जातीयताका कारण एउटा भोट पाउनु भएको थियो भरतले । एउटा पूरै प्यानलले त्यहाँ स्थायित्व जमायो । हामीलाई लाग्यो, यो अपत्रकारहरुको जमातले जित्यो । हामीले आफूलाई चाहिँ साँच्चिकै पत्रकार ठान्यौँ । त्यसैले 'ट्याक्टफूल' तरिकाले फिक्सनको दर्ता गर्‍यौँ र चूपचाप बस्यौँ । फिक्सनको लोगोहरु सबै कुराको डिजाइन भरत शाक्यले नै बनाउनु भएको हो । राजेन्द्र शलभले विधान ड्राफ्ट गर्नु भएको थियो । त्यो प्रतिष्ठा युद्ध थियो र पछि फिजन -चलचित्र पत्रकार संघ) को स्थापना भयो । शायद यो हुनुमा सिनेमाप्रति हामीले हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएर पनि हो । पत्रकारले देखेको कुरा मात्र लेख्छ, तर समीक्षकले तेस्रो आयामबाट पनि हेर्छ । पत्रकार समीक्षक नहुन सक्छ तर समीक्षक पत्रकार पनि हुनसक्छ । त्यतिबेला पनि बाटो फरक थियो र आज पनि फरक छ । पछिल्लो समयमा पत्रकार सक्रिय भए, तर समीक्षक निष्क्रिय रहे । किनभने समीक्षा गर्नुपर्ने विषय नै नेपाली सिनेमामा रहेन ।
सौता सिनेमामा करिश्माको स्क्याण्डल भयो । निर्देशक नारायण पुरीले किसिङ स्क्याण्डलमा पिटाइ खाएको कुरा थियो । मैले जे लेखेको थिएँ, त्यसको जिम्मेवार म थिएँ । त्यो पत्रिकामा मैले जे लेखेँ, त्यसको ठीक उल्टो छापियो । मेरा अनन्य मित्र प्रकाश सुवेदीजीले त्यो हेरफेर गर्नुभएछ । मेरो जिन्दगीमा घटेको सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना थियो । त्यसपछि हामी कहिल्यै सँगै हिँडेनौँ र मैले गिताञ्जली पत्रिकामा लेख्न बन्द गरेँ ।
कृष्ण मल्लको एउटी केटीसँगको सम्बन्धबारे केही छापिएको थियो । कृष्ण भट्टराई (अविरल) लाई कृष्ण मल्लले चिन्दैन पनि थिए । तर रसियन कल्चर सेन्टरअघिल्तिर उनलाई कृष्ण मल्लले हातपात गरे । यो मेरो पत्रिका 'पर्दा'मा छापिएका कारण भएको थियो । कृष्ण मल्लसँग सैद्धान्तिक रुपमा कहिल्यै सहमत नभए पनि उहाँ मेरो साथीहरुमध्ये एक हुनुहुन्छ । म मरेँ भने उहाँ मलामी जानुहुनेछ र म पनि उहाँ देहान्त भएको खबर थाहा पाएँ भने त्यहाँ जानेछु । तर मेरो सम्वाददाता पिटिएको कारण यो उनीसँग गाँसिएको एउटा स्क्याण्डल थियो ।
त्योभन्दाअघि पनि 'तरंग'मा छापिएको घटनाका कारण कृष्ण मल्लजीले मलाई खुकुरीले छिनाइदिन्छु भन्दै हिँड्नु भएको थियो । त्यतिबेला म निकै आँटी थिएँ । र, शायद लिम्बुवान् ठाउँमा जन्मिएका कारणले होला म पनि शूरवीर थिएँ । 'भन्दिनू, म पनि लिम्बूवान संस्कृतिमा जन्मिएको व्यक्ति हुँ, आफ्नो घाटानाफा बुझेर मात्र मसँग जोरी खोज्नु !' भन्ने गर्दथेँ । यस्तै विवाद पनि हरिवंश आचार्यसँग परेको थियो ।
मलाई के लाग्छ भने यहाँ प्रतिभाको कदर हुँदैन । अझ नेपालजस्तो देशमा जब जातीय कुरा उठ्न थाल्यो, जात ठूलो या सानो भएकै कारणले काम पाउनु पर्छ भन्नेजस्ता कुराले देश दिनदिनै भाँसिदो छ । मजस्तो समाजशास्त्र पढेका व्यक्तिले यो टुलुटुलु हेर्नुपर्दा दुःख लागेको छ । अमेरिका, बेलायत घुमेर आएपछि मलाई मेरा परिवारका व्यक्तिहरुले गाली गरेका थिए, अवसरको देशबाट तँ किन फर्किस् ? उनीहरुको प्रश्न जायज थियो । अहिले मजस्तो पीएच्डी व्यक्ति, आफ्नो देशमा बेरोजगार भएको छु । यति बेला तिनीहरुले गाली गरेको सही त थिएन भनेर सोचिरहेको छु ।
सञ्चारकर्मी कन्ट्रोभर्सी रोचक क्या बात ! सोच फिल्म फेस्टिबल निर्देशक नवीनता ग्ल्यामर घोषणा पार्टी अभिनेत्री पेज3अभिनेता कार्यक्रम रोमान्स सेक्स प्रविधि